मानसिक रोग : कति प्रकारको हुन्छ फोयिबा, आधारहीन डर यसको कारण र उपचार के ? – Sodhpatra
डरलाई रोग नबनाउनुहोस्, समयमै उपचार गर्नुहोस् !
प्रकाशित : २४ श्रावण २०७८, आईतवार २१:३८ August 8, 2021
डरलाई रोग नबनाउनुहोस्, समयमै उपचार गर्नुहोस् । फोयिबा एक यस्तो आधारहीन डर या अनुभव हो कि जसले बेचैनी र अशान्तिको जन्म दिन्छ ।
भय आफैँमा एक वास्तविक वा अवास्तविक खतराको मानसिक प्रतिक्रिया हो । मानिसहरुका लागि डर सामान्य कुरा हो । यस स्थितिमा हामीमा कुनै हानि हुँदैन । उदाहरणका लागि धेरै मानिसहरु माकुरा देखेर डराउँछन् त्यो भय हो । तर यसमा कुनै हानि हुँदैन ।
फोबिया आफैँमा एक भयानक डर हो । तर डर र फोबियाबी फरक पनि छ । हामी कत्तिको तीब्रतामा डराएका छौं ? त्यसको आधारमा यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन । फोबियाले कुनै पनि व्यक्तिको मानसिकतामा यति गहिरो प्रभाव पार्छ कि छोटो समयका लागि उसको मस्तिष्कले कामै गर्न छाड्छ । यो अनावश्यक डर पनि हो ।
साधारणतया फोबिया ३ प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ –
१. सोसल फोबिया
२. स्पेसिफिक फोबिया
सोसल फोबियाको समयमा पीडित व्यक्तिको शिकार भएका व्यक्तिहरु सामाजिक कार्यमा बेवास्ता गर्छन् । कहिलेकाहिँ उनीहरुलाई यस्तो अवस्थामा शर्मिलो हुनु पर्ने पनि हुन सक्छ ।
यसमा पीडितलाई सधैं लाग्छ कि मानिसहरु उसको बारेमा नराम्रो सोच्दछन् र उसलाई खिस्याउँछन् । त्यो सोचाइका कारण पीडितले सधैंभरि उसले आफूले आफैँलाई कमजोर ठान्न थाल्छ । उसले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउँछ । ऊ कुनै साक्षात्कार वा सार्वजनिक सभामा बोल्न सक्षम हुँदैन । ऊ सभामा उभिए पनि डगमगाउन थाल्छ । पीडितले डर निराधार छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि बेचैनी र घबराहटले उसलाई पछाडि छोड्दैन ।
पीडित कसैसँग कुरा गर्न र भेट्न डराउँछन् । यदि कसैसँग कुरा गरिहाल्यो भने पनि उसको मजाक उडाउने डरमा भेटको सबै समय गुजार्छ । बिस्तारै यो समस्या बढ्दै जाँदा पीडित यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि विवाह, बैठक वा अन्तर्वार्ता जस्ता समारोह वा कार्यक्रममा समेत ऊ जान चाहँदैन । साथीभाइसँग कुरा नगर्ने, अफिसमा सबैको अगाडि चुप लाग्ने जस्ता कामले आत्मविश्वास घटाउँछ । जसको कारण सोसल फोबियाको कारण हुन सक्छ ।
२. विशिष्ट फोबिया
विशिष्ट फोबियामा एक विशेष वस्तु, व्यक्ति वा स्थितिको डर लाग्नु हो । यस्तो स्थितिमा व्यक्ति कहिलेकाहीँ अत्यधिक खुसी वा कहिलेकाहीँ एक्कासी दुःखी हुने गर्छ ।
यो एक यस्तो साधारण डर हो कि कुनै निर्धारित वस्तु या हालत देखेर पैदा हुन्छ । जस्तो पीडित त्यो हालतको बारेमा सोच्यो कि पीडितले सही ढंगले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैन । विशिष्ठ फोबियाको पनि केही प्रकार हुने गर्छ ।
एनिमल फोबिया :
मानिसहरु जनावरसँग पनि डराउने गर्छन् । कोही मानिस कुकुरसँग डराउँछन् त कोही कुकुर र बिरालो वा सर्पसँग डराउँछन् । यो पनि विशिष्ठ किसिमको फोयिबा भित्र पर्छ ।
कुनै विशेष अवस्था जस्तो, उडान, घोडा सवारी, ड्राइभिङ, एक ठाउँमा एक्लै हुनु जस्ता केही परिस्थितिमा पनि केही मान्छे डराउने गर्छन् ।
प्राकृतिक वातावरण फोबियाः
पानी, आँधी, भीर आदिसँग डर लाग्नु ।
रगत, इन्जेक्सन, चोट आदिको फोबियाः
धेरै मानिसहरुलाई रगत दिएपछि पनि आफ्नो वा कसैको रगत बाहिर आएको देखेर चक्कर आउँछ । इंजेक्सन देख्दा उनीहरुको पसिना फुट्छ । यो पनि एक किसिमको फोयिबा हो ।
एगोराफोबियामा पीडित एक भीडमा पनि एक्लो महसुस गर्छ । उनी कुनै पनि सुपरमार्केटमा एक्लो महसुस गर्न थाल्छन् र यो भावनाले व्यक्तिलाई धेरै चोट पु¥याउन थाल्छ । यो अवस्थालाई एगोराफोबिया भनिन्छ । यो आतंक हमला आदिले रोगीहरुलाई एक तिहाइसम्म प्रभावित गर्न सक्छ ।
कहिलेकाहीँ एगोराफोबियाबाट पीडित बिरामी एक्लै घर छोड्न असमर्थ हुन्छ र एक विशेष परिवारको सदस्य वा साथीसँग मौ बाहिर जान्छ । एगोराफोबियाबाट पीडित बिरामीहरु आफ्नो अवस्थाका कारण गम्भीर पक्षघातको शिकार समेत हुन सक्छन् ।
शोधकर्ताहरु फोबियाको सही कारणहरुको बारेमा अझै निश्चित छैनन् । सामान्यतया फोबियाको पछि यी कारणहरु जिम्मेवार हुन्छन् ।
आनुवंशिक : अनुसन्धानले देखाएको छ कि परिवारमा एक निश्चित प्रकारको फोबिया छ भने अर्काे सदस्यमा पनि त्यो समस्या देखिने जोखिम बढी हुन्छ ।
जीवनका अनुभवहरु: धेरै प्रकारका फोबियास वास्तविक जीवनका घटनाहरुसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणको लागि एउटा कुकुरसँग डर लाग्नुको पछि सानो उमेरमा उसलाई कुकुरले टोकेको हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक फोबिया एक नाबालिग उमेरमा हुने घटनाका कारण विकास भएको हुन सक्छ ।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (सीबीटी) आफ्नो फोबिक लक्षणहरुलाई घटाउनमा धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ । यसको लागि यी विधि अपनाउन सकिन्छ ।
यस विधिमा व्यक्ति फोबिया र यसको उपचारको बारेमा शिक्षित हुन्छ । यस बाहेक त्यस्ता व्यक्तिलाई फोबिया बाट पीडित व्यक्तिलाई सहयोग गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिन्छ ।
यो विचारहरु र कल्पनाशीलताको आधारमा फोयिबा हटाउने प्रयास गरिन्छ ।
यस अन्तर्गत व्यवहार परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग गरेर फोबिया हटाउने विधि आदिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
अछाममा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
धनगढीको नेपाल वेस्टर्न कलेजमा रक्तदान कार्यक्रम, ३४ पिन्ट रगत सङ्कलन
हसुलियामा मिरर हस्पिटलको आयोजनामा हाइड्रोसिलको निःशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन हुने
नयाँ वर्षको पहिलो दिन धनगढीको खप्तड कलेजद्वारा रक्तदान, १७ पिन्ट रगत संकलन
‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नेपाली’ भन्ने नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मनायो विश्व स्वास्थ्य दिवस